Name	 အမည်	 Details
Male	 ကျား	 Details
OK	 အိုကေ	 Details
Error	 မှားယွင်းနေသည်	 Details
One or more questions have not been answered inavalid manner. You cannot proceed until these answers are valid.	 တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော မေးခွန်းများကို ဘောင်ဝင်အောင် ဖြေဆိုမထားပါ။ ၎င်းတို့အား ဘောင်ဝင်အောင် မဖြေဆိုဘဲ ရှေ့ဆက်၍ မရနိုင်ပါ။	 Details
တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော မေးခွန်းများကို ဘောင်ဝင်အောင် ဖြေဆိုမထားပါ။ ၎င်းတို့အား ဘောင်ဝင်အောင် မဖြေဆိုဘဲ ရှေ့ဆက်၍ မရနိုင်ပါ။
Only answer this if the following conditions are met:	 အောက်ပါ အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီနေမှသာလျှင် မေးခွန်းအား ဖြေဆိုပါ။	 Details
Only answer this if the following conditions are met:
အောက်ပါ အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီနေမှသာလျှင် မေးခွန်းအား ဖြေဆိုပါ။
Please choose *only one* of the following:	 အောက်ပါတို့မှ *တစ်ခုတည်းကိုသာ* ရွေးချယ်ပါ။	 Details
အောက်ပါတို့မှ *တစ်ခုတည်းကိုသာ* ရွေးချယ်ပါ။
Please contact %s ( %s ) for further assistance.	 အကူအညီများ ထပ်မံရယူနိုင်ရန် %s (%s) အား ဆက်သွယ်ပါ။	 Details
အကူအညီများ ထပ်မံရယူနိုင်ရန် %s (%s) အား ဆက်သွယ်ပါ။
Please write your answer here:	 သင်၏အဖြေအား ဤနေရာတွင် ရေးသားပါ -	 Details
သင်၏အဖြေအား ဤနေရာတွင် ရေးသားပါ -
No	 မဟုတ်ပါ	 Details
One or more mandatory questions have not been answered. You cannot proceed until these have been completed.	 တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော မဖြစ်မနေဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်းအား မဖြေဆိုရသေးပါ။ ၎င်းတို့ကို မဖြေဆိုဘဲ ရှေ့ဆက်၍ မရနိုင်ပါ။	 Details
တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော မဖြစ်မနေဖြေဆိုရမည့် မေးခွန်းအား မဖြေဆိုရသေးပါ။ ၎င်းတို့ကို မဖြေဆိုဘဲ ရှေ့ဆက်၍ မရနိုင်ပါ။
Save Now	 ယခု သိမ်းဆည်းမည်	 Details
Submit	 တင်သွင်းမည်	 Details
Submit your answers	 သင်၏အဖြေများအား တင်သွင်းမည်	 Details
Thank you for completing this survey.	 ဤစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအား ပြီးဆုံးအောင်ဖြေဆိုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။	 Details
ဤစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအား ပြီးဆုံးအောင်ဖြေဆိုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။